HTC ပြခန်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, HTC က
အကယ်၍ သင်သည် Android အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်အခြားမော်ဒယ်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းအမှတ်တံဆိပ်များမှ application များကိုကြိုးစားအသုံးပြုလိုသည်။ ငါတို့လုပ်နိုင်လို့ဒီနေ့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ် မည်သည့် Android terminal တွင်မဆို HTC ပြခန်းကို download လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ ROOT အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့ဖြစ်ရန်မလိုဘဲ။ ရိုးရိုး APK ဖိုင်ကို manual download နှင့် install လုပ်ရုံဖြင့်မလုံလောက်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၏ထိပ်ပိုင်းရှိဗီဒီယိုတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အရာများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံစုံ၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၏ပြခန်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုပြသသောနေရာတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ဤစာကိုဆက်လက်ဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ HTC Gallery မှ APK အားလုံးကိုသင်နှင့်မျှဝေပါသူကသူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအတိုင်းသူ့ကို install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းအမှန်ကိုပြောပြမယ်။
1 HTC ပြခန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
2 ကျွန်ုပ်၏ Android terminal တွင် HTC ပြခန်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် htc ပြခန်းအက်ပ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းရှိရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်စရာများအပြင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကိုပါပေးသည် timeline option ကို, သောဖမ်းယူသည့်နေ့ရက်အရသိရသည်ငါတို့အပေါငျးတို့သဖမ်းယူအားလုံးစုစည်းပါလိမ့်မယ်။
လျှောက်လွှာ၏ဘေးဘက်မီနူးကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုစုစည်းရန်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုပြသရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အယ်လ်ဘမ်များ, Tags:, တည်နေရာများ နှင့်ပြီးသားအံ့မခန်း commented အချိန်ဇယား.
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုကြည့်ရင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်းအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်၊ မျှဝေရန်ရွေးချယ်စရာများ၊ ဓာတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်ရန်ရွေးစရာသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာရွေးစရာများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ tools တွေ, ဆိုးကျိုးများ, filter များ o မားကို့စ။ ထိုနည်းတူစွာဤရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး သို့နှစ်ခုမျက်နှာများပေါင်းစည်းဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းသက်ရောက်မှုအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တကဲ့သို့ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို။
ကျွန်ုပ်၏ Android terminal တွင် HTC ပြခန်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
HTC ပြခန်းအက်ပ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်မသိသောအရင်းအမြစ်များမှ application များကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုချက်များအားပထမအကြိမ်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် Settings / လုံခြုံရေးအတွင်းကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ဒါပြီးပြီ ဒီ apk ဖိုင်ကိုသာ download လုပ်ပါ download ပြီးသွားရင်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ် - APK ပြခန်း HTC, ကြည့်မှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » [APK] မည်သည့် Android တွင်မဆို HTC ပြခန်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Jose Pedraja ဟုသူကပြောသည်
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ဒီ apk ကိုပြခန်းမှကူးယူပြီးကျွန်ုပ်၏ nexus5တွင်ထည့်သွင်းပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ Notification စင်တာမှာ Cloud တစ်ခုအတွင်းမိတ္တူပွားထားခြင်းပုံများဖုံးကွယ်ထားသည့်စာတစ်စောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများဟာ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို Cloud သို့ယူဆောင်သွားပါတယ်။ ! ဒီ apk မှာဒီ option မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကငါ့ဓာတ်ပုံတွေကိုခိုးနေသလား။
José Pedraja ကိုပြန်ပြောပါ
Rodrigo Acevedo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော်2ကြိမ်ကူးယူခဲ့ပေမယ့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး Samsung Galaxy S3 နဲ့သဟဇာတလား။
Rodrigo Acevedo အားပြန်ပြောပါ
Android Wear 5.0.1 ဗားရှင်းအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို Moto 360 တွင်ပေးထားသည်